IkhayaUMHLABAEuropeanI-30 GreeceAbasebenzi Bojantshi Bezitimela eGreece
Abasebenzi Bojantshi Bezitimela eGreece
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş I-30 Greece, European, UMHLABA, sesitimela, JIKELELE 0
Abasebenzi besitimela bangene esitimeleni
Ngokuphikisana nomthetho kahulumeni wentando yeningi 'wokuKhula' kahulumeni, abasebenzi besitimela e-Athene bamemezele ukuthi bazoshaya i24 njalo ngehora.
Abasebenzi bomgwaqo ongaphansi kwezitimela, i-tram, ibhasi kanye ne-trolleybus e-Athene bamemezele ukuthi bazobamba iqhaza esitelekeni sehora le-24 ukukhalaza amalungiselelo kahulumeni iNew Democracy (ND) kahulumeni. Isiteleka sizoba ngoLwesibili ngoLwesibili ku-Kifissia-Piraeus ujantshi kagesi wasedolobheni (ISAP) kanye nokuhamba komphakathi enhlokodolobha.
Ngosuku olufanayo, izikebhe nezikebhe ethekwini nazo zizothuthukiswa, futhi izisebenzi zasemanzini ngeke zisebenze zisuka e6 ngoLwesibili ziye e6 ngoLwesithathu.
Izikhulu zesikebhe ezingamaGrikhi zisanda kumemezela ukuthi bazoba esitelekeni. (haber.sol)
Abasebenzi Bezitimela zaseFrance Abalungiselela i-36 Daily Strike 02 / 04 / 2018 EFrance, abasebenzi be-SNCF 3 baqala ukuqhuba umsebenzi wabo wokuyeka umsebenzi ngoMsombuluko. Izikhulu ze-3 zixwayise izakhamizi zaseFrance ukuthi i-77% yabasebenzi bama-machinists bazojoyina isiteleka ngoLwesibili, ethi izimoto zizophazamiseka kakhulu. Ngaphansi kokuthiwa yi-"Railway Challenge", abasebenzi bezinhlangano bazobamba isenzo sokuyeka umsebenzi osukwini lwe-3 ngezinyanga ze-36 ezilandelayo. Abasebenzi be-SNCF basabela kumthethosivivinywa kaMongameli u-Emmanuel Macron ukuze kuvezwe indlela yokubambisana kwezitimela zaseFrance. U-Macron ufuna nokushintsha isimo esikhethekile sabasebenzi basitimela ngomthetho. Umsebenzi omzimba kakhulu, nabasebenzi bezitimela abasebenza ebusuku nokuhamba ngezimpelasonto kusenesikhathi.
Abasebenzi bezokuThutha basePark Park Ukulungiselela Ukushaya 08 / 05 / 2019 Ezokuthutha Isivumelwano Sokuxoxisana Kwabonke Phakathi kweSitimela-İş Union, ehlelwe ePark kanye nenyunyana yendawo uSen-umqashi, ivinjelwe. Sinamalungu ayizinkulungwane ku-Transportation Park. Uma izimfuno zethu zingamukeleki, sizoshaya. " UKWENZISWA KWESIKHATHI Isikhungo Segatsha Samaholo I-Adapazari Isitimela-Ibhizinisi Lase-Kocaeli Transportation Park I-Halit Turan, ummeli wezisebenzi endaweni yase-Local-Sen, bathi abakwazi ukuyekethisa. I-Turan yaphendula imibuzo ephephandabeni lethu yathi: "Izimfuno zethu zinengqondo futhi zingabantu. Ezokuthutha Sinezimalunga eziyinkulungwane ePark. Imiholo yethu iyinkokhelo encane, okungukuthi i-2020 TL. Kanye nezinye izinzuzo zenhlalakahle, inani le-2 lama-750 ayifinyelela ku-TL. Isidingo sethu ukuthi amaholo ethu yi-3 ...
Abasebenzi Basitimela Bashaya eFrance 13 / 06 / 2013 Abasebenzi Basitimela Bahlasela EFrance Abasebenzi baphikisa iphrojekthi kahulumeni wezenhlalakahle ukuze bahlanganise izinkampani ezahlukene zesitimela ezweni. Ngenxa yesiteleka, ukuhanjiswa kwezitimela ezisheshayo kulindeleke ukuba kube yinkimbinkimbi kulo lonke izwe. I-National Railway yamemezele ukuthi i-10 kuphela izokhonza kusukela esitimeleni se-4 ngokushesha kusasa ngenxa yesiteleka. Ngenxa yesiteleka, izindiza zeFrance phakathi kwe-Italy neSwitzerland zizokhanselwa isigamu. Isiteleka akulindelekile ukuthi kuthinte isevisi yesitimela esheshayo esuka eFrance kuya eBelgium naseNgilandi. Ngenxa yesiteleka, izitimela zasebusuku phakathi kweFrance neSpain zizokhanselwa.
Abasebenzi Basitimela Bahlanganyela Ekuhlakalweni EFrance 01 / 06 / 2016 Abasebenzi Bezitimela Bamba iqhaza Ekuhlakalweni EFrance: Kusukela manje, abasebenzi bezitimela bahlanganyela emibhikishweni ehlelwe eFrance ukuphikisana nokuguqulwa komthetho wezabasebenzi. EFrance, abasebenzi bezitimela bebelokhu behlanganyela ekuhlaselweni okuhlelwe ukuphikisana nokuguqulwa komthetho wezabasebenzi futhi basakaze kulo lonke izwe. Ngenxa yokuntuleka kwephethiloli ezweni ngemuva kokuba izisebenzi zokuhlanza zenze isiteleka, umphakathi uthanda isitimela emavikini amuva nje. Izigameko eziqalene nezinguquko uhulumeni ofuna ukuzenza emthethweni wezomsebenzi usuvele usakaze emkhakheni wezokuthutha. Ukubandakanyeka kwabasebenzi bezitimela zokuthutha ezikhubazekile ezweni. Ezindaweni eziningi, izitimela zinciphise inani lezindiza. Air France abaqhubi ...
Abasebenzi Bojantshi bezitimela eSpain 01 / 08 / 2019 ESpain, ukuphuma kwesitimela i-700 kukhanseliwe ngenxa yesiteleka esabizwa ngabakwaGeneral Work Confederation (CGT) lapho abasebenzi bezitimela bahlangene khona. Inyunyana yabasebenzi i-General Lab Confederation Union (CGT) ifuna ukulungiswa kwezinto ezinjengamazinga aphansi amabhonasi, ukukhipha kanye nokuntuleka kwabasebenzi. Kwamenyezelwa ukuthi i-12.00, enye yezitimela ezithwala izimpahla, abagibeli, abagibeli bezimoto ezihamba phambili ezweni, yakhanselwa ngemuva kwesinqumo sesiteleka esithathwe yinyunyana yabasebenzi phakathi kwe16.00 ne20.00 naphakathi kwe24.00 ne700. Inyunyana i-General Business Confederation Union (CGT)…
Isikhumbuzo Sosizi KwabakwaMishini abashona engozini yesitimela eBilecik
I-Göztepe Ümraniye Metro Line isebenza futhi
Abasebenzi Bezitimela zaseFrance Abalungiselela i-36 Daily Strike
Abasebenzi bezokuThutha basePark Park Ukulungiselela Ukushaya
Abasebenzi Basitimela Bashaya eFrance
Abasebenzi Basitimela Bahlanganyela Ekuhlakalweni EFrance
Abasebenzi Bojantshi bezitimela eSpain
Abasebenzi baseSweden basebenzela isiteleka
Abasebenzi base-İZBAN banquma ukuqhubeka behlupha
Namuhla emlandweni: 14 September 1908 abasebenzi base-Anatolian nabaseMpumalanga bahamba ngesiteleka ...
Namuhla emlandweni: 14 September 1908 abasebenzi base-Anatolia nabaseMpumalanga Sitimela bahamba ngesiteleka.
Izisebenzi zesitimela zaseBelgium zenze isiteleka
Ingosi Yezindaba Khetha inyanga Okthoba 2019 (368) Septemba 2019 (555) Agasti 2019 (508) Julayi 2019 (633) Juni 2019 (504) Kwangathi i-2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) I-February 2019 (483) UJanuwari 2019 (502) Ibanga 2018 (620) Novemba 2018 (504) Okthoba 2018 (435) Septemba 2018 (517) Agasti 2018 (486) Julayi 2018 (506) Juni 2018 (581) Kwangathi i-2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) I-February 2018 (500) UJanuwari 2018 (557) Ibanga 2017 (509) Novemba 2017 (427) Okthoba 2017 (538) Septemba 2017 (455) Agasti 2017 (505) Julayi 2017 (479) Juni 2017 (477) Kwangathi i-2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) I-February 2017 (477) UJanuwari 2017 (538) Ibanga 2016 (487) Novemba 2016 (631) Okthoba 2016 (657) Septemba 2016 (542) Agasti 2016 (608) Julayi 2016 (485) Juni 2016 (661) Kwangathi i-2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) I-February 2016 (855) UJanuwari 2016 (751) Ibanga 2015 (799) Novemba 2015 (640) Okthoba 2015 (624) Septemba 2015 (428) Agasti 2015 (493) Julayi 2015 (505) Juni 2015 (535) Kwangathi i-2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) I-February 2015 (878) UJanuwari 2015 (1077) Ibanga 2014 (963) Novemba 2014 (826) Okthoba 2014 (771) Septemba 2014 (598) Agasti 2014 (808) Julayi 2014 (911) Juni 2014 (735) Kwangathi i-2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) I-February 2014 (720) UJanuwari 2014 (733) Ibanga 2013 (664) Novemba 2013 (656) Okthoba 2013 (548) Septemba 2013 (570) Agasti 2013 (533) Julayi 2013 (661) Juni 2013 (577) Kwangathi i-2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) I-February 2013 (811) UJanuwari 2013 (906) Ibanga 2012 (911) Novemba 2012 (1168) Okthoba 2012 (830) Septemba 2012 (886) Agasti 2012 (974) Julayi 2012 (863) Juni 2012 (591) Kwangathi i-2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) I-February 2012 (546) UJanuwari 2012 (417) Ibanga 2011 (149) Novemba 2011 (35) Okthoba 2011 (23) Septemba 2011 (18) Agasti 2011 (25) Julayi 2011 (18) Juni 2011 (16) Kwangathi i-2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) I-February 2011 (24) UJanuwari 2011 (13) Ibanga 2010 (335) Novemba 2010 (12) Okthoba 2010 (15) Septemba 2010 (12) Agasti 2010 (16) Julayi 2010 (9) Juni 2010 (19) Kwangathi i-2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) I-February 2010 (303) UJanuwari 2010 (1838) Ibanga 2009 (4) Novemba 2009 (1) Okthoba 2009 (3) Septemba 2009 (3) Agasti 2009 (2) Juni 2009 (3) Kwangathi i-2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) I-February 2009 (4) UJanuwari 2009 (3) Novemba 2008 (1) Okthoba 2008 (1) Septemba 2008 (2) Agasti 2008 (1) Julayi 2008 (2) Juni 2008 (2) Kwangathi i-2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) I-February 2008 (5) UJanuwari 2008 (2) Ibanga 2007 (2) Okthoba 2007 (2) Julayi 2007 (1) Kwangathi i-2007 (1) April 2007 (1) I-February 2007 (2) UJanuwari 2007 (1) Ibanga 2006 (1) Okthoba 2006 (3) Agasti 2006 (1) Juni 2006 (2) Kwangathi i-2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) Novemba 2005 (2) Agasti 2005 (1) Juni 2005 (1) March 2005 (2) I-February 2005 (1) UJanuwari 2005 (1) Ibanga 2004 (1) Okthoba 2004 (3) Julayi 2004 (1) Kwangathi i-2004 (2) Ibanga 2003 (1) Okthoba 2003 (1) Kwangathi i-2003 (1) March 2003 (1) I-February 2003 (1) UJanuwari 2003 (1) Ibanga 2002 (1) Okthoba 2002 (4) Agasti 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) UJanuwari 2002 (2) Julayi 2001 (1) Juni 2001 (1) March 2001 (1) Kwangathi i-2000 (3) March 1999 (1) Okthoba 1998 (2) March 1998 (1) Agasti 1997 (1) Okthoba 1996 (1) Agasti 1996 (2) Kwangathi i-1995 (1) Agasti 1992 (1) Kwangathi i-1990 (1)